मंसिरको पहिलो हप्ताबाट विराटनगर जुट मिल संचालनमा आउने :: प्रकाश ढुंगाना :: Setopati
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, कात्तिक २६
मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल बन्द अवस्थामा छ। विस १९९३ सालमा स्थापना भएको उद्योग धरासायी भएपछि सरकारले ३ पटक चलाउने प्रयास गर्‍यो । ती सबै प्रयास असफल भए ।
आजभन्दा १५ वर्षअघि नीजि क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सरकारले उद्योग संचालन गर्ने जिम्मा दियो । मजदुर आन्दोलनको भार उसले थेग्न सकेन र हात झिक्यो।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको उद्योग पुन संचालन तयारीको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यसैसन्दर्भमा विराटनगर जुट मिल लिमिटेडका अध्यक्ष बसन्त वनसँग गरिएको कुराकानी
फेरि विराटनगर जुट मिल संचालनमा आउने भयो, तयारी कहाँ पुग्यो ?
लगभग लगभग तयारीहरु सकिन लागेका छन्। हामीले युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं। काठमाडौं विश्व विद्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर, इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु र यस उद्योगमा पहिले काम गरेका मेकानिकल इन्जिनियरहरुको टोलीबाट मेकानिकल अडिट पश्चात मेसिनहरु मर्मत गरिरहेका छौं ।
मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र उद्योग संचालन गर्ने तयारीमा हामी छौं। सुरुमा दैनिक १० टन जुट उत्पादन गर्ने र केही समयपछि २० टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौं । विराटनगर जुट मिलको क्षमता दैनिक ४५ टन जुट उत्पादन गर्ने हो । हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने जुट मिल वर्षको २८ करोड मुनाफा दिन्छ।
नयाँ मेसिन नै किन्नु भयो कि पुरानै मेसिनबाट उत्पादन सुरु गर्न सकिने भयो ?
पहिला लिजमा लिएको विनमस इन्टरनेशनलले जुट मिलका मेसिनहरु कवाडी भइसकेको र नयाँ किन्नुपर्ने बताएको थियो। हामी सबैको मानसिकता पनि पुराना मेसिनहरु के संचालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने नै थियो ।
भारतमा गएर जुट मिलमा प्लान्ट हेरियो, नयाँ मेसिनहरु हेरियो। तर पुराना मेसिनले पनि पुराना प्रोडक्ट निकाल्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गयो। बोरा, चकटी, धागो त पहिला पनि ती नै मेसिनबाट उत्पादन भएका हुन। विज्ञहरुको टोलीले पनि मेसिन मर्मत गरेर संचालन गर्न सकिने बतायो । पहिलाका पुराना पनि अहिले पनि उत्तिकै बलियो रहेको उनीहरुले बताए।
जुट मिलको ऋण हेर्ने हो भने, अहिले धेरै छ। यतिका धेरै ऋण तिर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ नेतृत्वको टिमले कसरी व्यवस्था गर्छ ?
नेपाल बैंक लिमिटेडबाट १ करोड ७५ लाख ऋण लिएकोमा हाल बैंकको ब्याज मात्र १ सय ५५ करोडभन्दा बढी पुगेको छ। एनआएडिसीबाट १० लाख ऋण लिएकोमा ब्याज मात्र १ करोड ५७ लाख पुगेको छ।
२०५१ सालमा उदयपुर सिमेन्टबाट ४५ लाख रुपैयाँ लिएकोमा ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ उसलाई तिर्नुपर्ने छ। औषधि लिमिटेडबाट लिइएको औषधिको रकम तिर्न सकिएको छैन।
यसअघि जुट मिल थला परेपछि उस्कान बेला बेलामा ऋण लिइएको देखिएता पनि ब्यवस्थापन कमजोरका कारण त्यसलाई सेटल गर्न सकिएन। ऋण तिर्दा विशेष छुटको ब्यवस्था हुने कानुनी प्रावधान रहेछ। ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा सरकार पनि सेयर होल्डर भएको हुदाँ विज्ञ टिम बसेर यसलाई टुंग्याउछौं ।
जुट मिलमा देखिएको सेयर विवाद के हो ?
सरकारको सेयर र नीजि क्षेत्रको सेयरमा विवाद देखिदैँ आएको छ। श्री इन्डष्ट्रिजको नाममा २२७२१ कित्ता र सर्वसाधारणको नाममा ३५६६६ कित्ता देखिएको छ। अरुले पनि दाबी गरेका छन् ।
अब हामीले पुराना सेयरको हकवाला को हो थिए भने इतिहासकार राखेर हकवाला खोज्छौ। धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीमा पहिलो विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंक लिमिटेड भनेर सम्मान सम्मान समेत गरेको छ। विराटनगर जुट मिल बन्द भएपछि सेयर कारोबार बन्द भयो। बन्द भएका उद्योगहरुको सेयर कारोबार ओटिसीमार्फत थाल्ने तयारी भइरहेको छ।
विराटनगरमा नै अहिले ५ वटा जुट मिल संचालनमा छन्, उनीहरुसँग प्रतिष्प्रर्धा गर्न कत्तिको चुनौति छ जस्तो लाग्छ ?
उनीहरुसँग हाम्रो स्वस्थ प्रतिष्प्रर्धा रहन्छ। सहकार्य गरेर हामी अघि बढ्छौं। अर्को कुरा नेपालबाट अहिले जुट खेती लोभ भइसकेको छ। वाषिर्क ३ हजार देखि ४ हजार टन जुट उत्पादन नेपालमा हुन्छ भनिन्छ । सबैले जुट ल्याउने मुख्य बजार भनेको भारत हो, त्यसपछि बंगलादेश । अहिलेको बजार पनि उतै छ। उनीहरुसँग हाम्रो स्वस्थ प्रतिष्प्रर्धा रहन्छ।
संचालन हुदैँ पटक पटक बन्द हुदैँ आएको उद्योग संचालनमा जोखिम त छदैछ ? दिर्घकालिन रुपमा उद्योग संचालन गर्न केही योजनाहरु तय गर्नुभएको छ कि ?
अहिले ७० जना जनशक्ति छन् । २० टन उत्पादन सुरु गर्ने बेलामा १३ सय कामदार चाहिन्छ। मेसिन बनाएर पुरा संचालन गर्ने सोच छ। ४५ टन प्रतिदिन उत्पादन गर्न ३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन् ।
नेपालमा पुरानो उद्योग भएका कारण औद्योगिक संग्राहलय निमार्ण गर्ने योजना छ। यसका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढिसकेको छ। अवको ४ वर्षमा जुटको झोला र कपडा बनाउने मेसिन आयात गरेर उद्योगलाई आधुनिक रुपमा विस्तार गर्ने सोच छ।
४ वर्षमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कृषकहरुलाई जुट खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सरकारसँग मिलेर विभिन्न प्याकेजहरु ल्याउने छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, कात्तिक २६, २०७४, ०७:५२:३८
चिनी तस्करी रोक्न भन्सार कार्यालयलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
देशभरको गाडी भाडा सार्वजनिक, कहाँको कति?
ट्याक्सी भाडा बढ्यो
काठमाडौंमा न्यूनतम गाडी भाडा १४ रुपैयाँ पुग्यो
स्वतन्त्र निर्माण कालिगढ संघको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न
दसैँको सुपथ पसल १२ गतेदेखि, यस्तो छ छुटपछिको मूल्य